Fisavana eny amin’ny seranana : tsy manaiky ny hitsabahan’ny zandary ny asany ny ladoany | NewsMada
Fisavana eny amin’ny seranana : tsy manaiky ny hitsabahan’ny zandary ny asany ny ladoany
Noho ny zava-misy maro tsy ara-dalàna hita eny amin’ny seranan-tsambo na seranam-piaramanidina, nanao fanambarana mazava, omaly, ny Sendikàn’ny mpiasan’ny ladoany (Sempidou).
Araka ny lalàna momba ny asan’ny ladoany, andraikitry ny mpiasan’ny fadintseranana feno ny manao fisavana ara-toekarena (fouille économique) fa tsy iraisana na amin’iza na amin’iza. Nolazain’izy ireo fa ny volana jolay 2016, raha teny Ivato ny filoham-pirenena, efa nanome baiko ny zandarimariam-pirenena ny tsy tokony hisavan’izy ireo intsony ny olona eny amin’ny Tarmac. Efa sahanin’ny orinasa Samada (Sûreté aéroportuaire de Madagascar) ny lafiny fiarovana, ary anjara asan’ny fadintseranana ny fisavana ny lafiny toekarena.
« Tsapa anefa fa tsy voahaja hatrany izany fa mbola tsabahin’ny zandary ihany ny asanay. Mba hisian’ny rindran-damina eny amin’ny seranam-piaramanidina rehetra, takinay ny handraisan’ny filoham-pirenena andraikitra mahakasika io olana io, hampitsaharana ny fisavana ny lafiny toekarena ataon’ny zandary eny amin’ny Tarmac ao anatin’ny herinandro », hoy ireo mpikambana ao amin’ny sendikà.
« Manamarika ihany koa izahay noho ny fanamparam-pahefana ataon’ny mpiasan’ny Samada aminay, toy ny nitranga tany Mahajanga, izay manompa sy mandrahona ho faty. Koa takinay ny sazy ho azy ireny noho ny fandikan-dalàna », hoy ihany ny ao amin’ny Sendikàn’ny mpiasan’ny fadintseranana.
Mba tsy hiverimberenan’ny olana toy izany, mitaky ny ao amin’ny sendikà hisian’ny fifampiresahana mazava eo amin’ny mpisehatra rehetra eny amin’ny seranam-piaramanidina manerana ny Nosy, ahitana ny Samada, ny polisy, ny zandary, ny ACM ary ny ladoany. Momba ny Gasynet indray, izay ho tapitra amin’ity taona ity ny fifanarahana aminy, tsy manaiky ny mety hanavaozana izany avy hatrany ny ao amin’ny fadintseranana fa mitaky famolavolàna fifanarahana vaovao mazava mba hamerenana amin’ny toerany ny hasin’ny fadintseranana. Atao amin’izany ny fanokafana tolo-bidy ho an’ny rehetra ao anatin’ny mangarahara tanteraka.